Wholesale 90cm Traditional Curved Glass Island Hood 803 Manufacturer and Supplier | ARCAIR
90cm Chinyakare Yakakomberedzwa Girazi Island Hood 803
Traditional curved glass island hood 90cm zvinonyatso tora utsi negirizi.
Multiple Extraction mota ine yakaderera ruzha kutonga ne3 kumhanya bhatani.
Simba rekuchengetedza mwenje we LED ramba uchishanda kweanopfuura maawa gumi Dishwasher yakachengeteka aruminiyamu girisi sefa.
2 Ventilation Modes: Kutenderedza mukati nekabhoni mafirita (asina kuisirwa) uye Kufefetera kunze nepombi yepombi sutu yenzvimbo yekubikira yakasiyana.
90cm Traditional curved glass island range hood Ichi chigadzirwa sutu yekicheni yakashama iyo yakakurumbira dhizaini yekujoinha kuimba yekutandarira Iine injini ine simba inobvumira kusvika 1000m3 / hr kudhonza kunogona kubvisa huwandu hukuru hwehutsi uye hwema hwekubika zviri nyore kubva mumhepo. Iine simba uye simba rekuchengetedza mota inogona kuwana A++ (inonyatsoshanda) kuenda kuE (isingashande) teerera iyo EU nhungamiro, yakasarudzwa nechido chako.
Ruzha rwakaderera kwazvo rwehood haruzokanganise nhaurirano yevanhu vanobika kunyangwe pakumhanya kwesimba kukuru. Mechancial control iri nyore kushanda ine 3 kumhanya kwakagadzirirwa marudzi akasiyana ekubika, chengeta kicheni yako nyowani & yakachengeteka kuti unakirwe nenguva yekubikira mhuri yako.
Iine inogezeswa aluminium girizi sefa inonyanya kubata uye kubvisa kunhuhwirira kwekubikira, iri nyore kuisa uye kutsiva.
Nesarudzo dzinochinjika pakati pekudzokorora kana kufemesa mweya wakananga:
1.Recirculating mode: Mafirita emarasha anodiwa kana nzvimbo yako isingabvumirwi kuisa pombi yekunze.Mafirita emarasha anotsiviwa mwedzi miviri kusvika ku4 zvichienderana nekushandisa frequency; yechitsuwa hood, isu tinogara tichikurudzira kushandisa neinodzokorodza modhi. Chigadzirwa chedu hachina kusanganisa marasha mafirita asi isu tinogona kupa sezvikamu zvakasara zvaunogona kutenga uye kuisa wega.
2. Yakananga mhepo inopedza simba mode: Inoshandiswa se ducting vent cooker hood ine duct pombi 150mm mudhayamita. Pombi ye2M inosanganisirwa muchigadzirwa chedu uye kana iwe uchida kuchinja mushure mekushandisa kwenguva yakareba, zvichave nyore kutenga kubva muchitoro chekuvaka kana chitoro asi sarudza iyo dhayamita chaiyo 150MM.
4 * 2W simba LED mwenje installl pazasi pevhavha panhizha, zvinonyatso kuvhenekera iwe nzvimbo yebasa kuti uone zvirinani paunenge uchibika uye inogona kujeka murima. LED iri nyore kutsiva uye inogona kuramba ichishanda pamusoro pe10,000 maawa
Curve glass island hood inorembera padenga, yakashongedzwa nekukwirira inogadziriswa 600+600MM chimneys. Inoda kuiswa nevanhu vane hunyanzvi.
Zvakapfuura: 60cm Angled Wall Yakaiswa Cooker Hood 725
Zvinotevera: Yakagadzirwa Island Cooker Hood 820
Cooker Hood Yakachena
Kuisa Cooker Hood
Cooker Hood Led Chiedza
Mhando dzeCooker Hood
Pasi peCabinet Range Hood
zvinhu: Inox Aisi 430+Tempered Glass
Kudzora Type: Push bhatani
Mwenje: 4x2W mwenje we LED
Sefa Rudzi: 2pcs Alu sefa
Chimney Kuwedzerwa: 600+600mm
Kurodha QTY(20/40/40HQ): 66/144/191(90cm)
Material: Inox Aisi 304/white/black/brown pendi
Chinja: bhatani remagetsi / Bata switch
Motokari: 1000m3/h,650/900m3/h DC mota
Sefa: Baffle/marasha/VC sefa
Yakajairika Slim T Shape Island hood 802
Yakakwirira End T-Shape Yakazara LED Panel Island hood 810
Yakagadzirwa Island Cooker Hood 807
90cm Traditional Flat Glass Island Hood 801
Yakasimba Island Cooker Hood 822A